Injury Archives - Myanmar Sports Villages
“အဂူရိုကိုကြည့်ရတာ သိပ်ပြီး အခြေအနေကောင်းပုံမပေါ်ဘူး” #ဂွာဒီယိုလာ
မန်ချက်စတာစီးတီးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်က အာဆင်နယ်အသင်းကို အိမ်ကွင်း အီတီဟတ်မှာ ၃ ဂိုးပြတ်ဖြင့် အနိုင်ယူခဲ့ပြီးနောက် ယနေ့နံနက်အစောပိုင်းမှာလည်း နောက်ထပ် အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ ဘန်လေအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာ ဂိုးပြတ်အနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။ မန်စီးတီးဟာ ဒီပွဲမှာ ဘန်လေအသင်းကို အဘက်ဘက်မှ အသားစီးရယူပြီး အိမ်ကွင်းမှာ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ၃ မှတ် အပြည့်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုပွဲဆက်နိုင်နေတဲ့အတွက် လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ ချန်ပီယံဖြစ်ခွင့်ကို အနည်းငယ်နှောင့်နေးအောင် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သော်လည်း အရေးပါတဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်ကို ဒီပွဲမှာ ဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ်။ စီးတီးရဲ့ ယခုရာသီ သွင်းဂိုးအများဆုံး တိုက်စစ်မှူး အဂူရိုဟာ ပွဲချိန် ၄၅ မိနစ်မှာ ဘန်လေနောက်ခံလူ ဘန်မီးနှင့် ထိခိုက်မိပြီး ဒူးမှာ ဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဒူးဒဏ်ရာကြောင့်ပင် အဂူရိုဟာ ဆက်လက်မကစားနိုင်တော့ပဲ ဂါဘရီရယ်ဂျေဆူးနှင့် လူစားလဲခဲ့ရပါတယ်။ အဂူရိုရဲ့ ဒဏ်ရာအခြေအနေ အတိမ်အနက်ကို မသိရသေးသော်လည်း နည်းပြ ဂွာဒီယိုလာကတော့ စိုးရိမ်စိတ်အပြည့်ရှိနေကြောင်း ပွဲအပြီး အင်တာဗျူးမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။...
ရာသီကုန်သည်အထိ မြက်ခင်စိမ်းနှင့် ဝေးကွာတော့မည့် အာဆင်နယ်နောက်ခံလူ #ပါဘလိုမာရီ
အာဆင်နယ်အသင်းနောက်ခံလူ ပါဘလိုမာရီဟာ စီးတီးနှင့် ပွဲ၌ရရှိခဲ့သည့် ခြေကျင်းဝတ်အရွတ်ထိခိုက်မိသည့်အတွက်ကြောင့် လက်ကျန်ရာသီပွဲစဉ်အားလုံးကို လွဲချော်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ အဆိုပါပွဲမှာတော့ မာရီဟာ ပွဲချိန် ၂၄ မိနစ်၌ စီးတီးကစားသမား ကိုင်လီဝေါ်ကာနှင့် ထိခိုက်ကာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ဆက်လက်မကစားနိုင်တာကြောင့် ဒေးဗစ်လုဇ်နှင့် လူစားလဲခဲ့ရပါတယ်။ ပွဲအပြီးမှာတော့ နည်းပြအာတီတာကိုယ်တိုင် မာရီရဲ့ အခြေအနေဟာ မဟန်ကြောင်း ဝန်ခံသွားခဲ့ပါတယ်။ The Athletic သတင်းစာ၏ ဖော်ပြချက်အရ မာရီဟာ လက်ကျန် (၉) ပွဲစလုံး လွဲချော်တော့မှာဖြစ်ပြီး လိုအပ်ပါက ခြေကျင်းဝတ်ကို ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူရတော့မှာဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ မာရီ ဒဏ်ရာရရှိသွားသည့်အတွက်ကြောင့် ၎င်းရဲ့နေရာမှာ ယခုရာသီ (၉) ပွဲသာ ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိထားသည့် ရော့ဘ်ဟိုဒင်းကို သုံးစွဲဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ မာရီဟာ ဘရာဇီးလ်ကလပ် ဖလာမင်ဂိုအသင်းမှ အဌားဖြင့် ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ရာသီအကုန်မှာ ပေါင် ၁၀ သန်းဖြင့် ခေါ်ယူဖို့ သဘောတူညီမှုရယူထားပါတယ်။ နောက်ထပ်ဒဏ်ရာရကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်သည့်...
ပရိသတ်နှင့် အသင်းဖော်များအတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပေးဆပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြုံးဝါးခဲ့သည့် မန်စီးတီးနောက်ခံလူ #မန်ဒီ
ဒဏ်ရာများနှင့် လုံးလည်ပတ်ချာလည်နေသော စီးတီးနောက်ခံလူ မန်ဒီဟာ ဒဏ်ရာမှပြန်လည်သက်သာလာပြီဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် အသင်းအတွက် ပြန်ကစားပေးဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပြီး အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြုံးဝါးခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် မန်ဒီဟာ မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သော်လည်း ကြံ့ခိုင်မှု အားနည်းသည့်အတွက်ကြောင့် အင်္ဂလန်မြေမှာရုန်းကန်နေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကစားခွင့်ရတဲ့ အခိုက်အတန့်မှာတော့ မန်ဒီဟာ မခိုမကပ်ပဲ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပြီး တိုက်စစ်ကို ကောင်းကောင်းပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မန်ဒီဟာ ယခုရာသီအစောပိုင်းမှာ ဒူးဒဏ်ရာကြောင့် ပွဲစဉ်တော်တော်များများကို လွဲချော်ခဲ့ပေမယ့် ပါဝင်ကစားခွင့်ရခဲ့တဲ့ စုစုပေါင်း (၂၃) ပွဲမှာတော့ ဂိုးဖန်တီးမှု (၄)ကြိမ်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ မန်စီးတီးပရိသတ်တွေကလည်း ပြင်သစ်သားရဲ့ အကောင်းဆုံးပုံစံကို မြင်တွေ့ချင်သလို၊ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း မန်ဒီရဲ့ တိုက်စစ်၊ ခံစစ် အမြင့်ဆုံးမြင်တွေ့ရဖို့ မျှော်လင့်ထားသင့်ကြောင်း မန်ဒီက ပြောခဲံပါတယ်။ “ပြောသလောက်တော့မလွယ်ဘူး။ ကျွန်တော် အဆင်ပြေနေတယ်လို့လည်းမပြောချင်ဘူး။ ဒီလိုပြောလိုက်ရင် ကျွန်တော်ဟာ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့သူ၊ ရည်မှန်းချက်မရှိတဲ့သူလို့ မြင်သွားလိမ့်မယ်။...
အေတီကို ကြယ်ပွင့် ဂျိုဝါအို ဖီးလစ်ဟာ ယမန့်နေက ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ထရိန်နင်းအစီအစဉ်မှာ ဘယ်ဘက်ဒူးအရွတ်ထိခိုက်မိသည့်အတွက်ကြောင့် အနည်းဆုံး ၃ ပတ်ခန့် အနားယူရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း အေတီကိုမက်ဒရစ်မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ၃ ပတ်လောက်အနားယူရတော့မှာဖြစ်သည့်အတွက် လာလီဂါပြိုင်ပွဲပြန်စပါက ကစားမည့် ဘီဘာလ်အိုနှင့် ပွဲစဉ်ကို လွဲချော်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများနေပါတယ်။ အေတီကိုမက်ဒရစ်မှ “ဂျိုဝါအို ဖီးလစ်ဟာ ဘယ်ဘက်ဒူးအရွတ်မှာ အပေ့ါစားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ Universidad de Navarra ဆေးခန်းမှာ ဆေးစစ်မှုတွေပြုလုပ်ခံယူခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်” လို့ တရားဝင်စာထုတ်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ယခုဒဏ်ရာဟာ အေတီကိုရဲ့ စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေး ကစားသမား ဂျိုဝါအိုဖီးလစ်အတွက်တော့ တတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗလင်စီယာနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ခြေကျင်းဝတ် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဆိုပါဒဏ်ရာကြောင့် လာလီဂါပွဲစဉ် (၄) ပွဲ နှင့် ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ် (၂) ပွဲကို လွဲချော်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ ကြွက်သားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် နှင့် ကစားရမည့်...
Categories Injury/La Liga
အာဆင်နယ်ကို စွန့်ခွာပြီး ဝက်စ်ဟမ်းကို ပြောင်းလိုက်တာ အလုပ်မဖြစ်ပါဘူးလို့ ဝန်ခံခဲ့သည့် ဝီရှိုင်းယား
အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ငယ်မွေးခြံပေါက် ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည့် အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်လူ ဂျက်ဝီရှိုင်းယားဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ စာချုပ်သစ်ကမ်းလှမ်းမှုကို ငြင်းပယ်ပြီး ဝက်စ်ဟမ်းယူနိုက်တက်သို့ အလွတ်ကြေးဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းဟာ ဝီရှိုင်းယားကို အလွတ်ကြေးနှင့်အတူ သုံးနှစ်စာချုပ်ဖြင့် ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဝီရှိုင်းယားဟာ အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဝက်စ်ဟမ်းယူနိုက်တက်ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သော်လည်း ထင်သလောက်မဖြစ်လာတဲ့အကြောင်း ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။ ဒဏ်ရာများရဲ့ နှိပ်စက်မှုကြောင့် ကစားသမားဘဝအဆုံးသတ်မလိုထိဖြစ်ခဲ့ရဖူးတဲ့ ဝီရှိုင်းယားဟာ ဝက်စ်ဟမ်းယူနိုက်တက်မှာလည်း ဒဏ်ရာများနှင့်ပင် ဆက်လက်ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီး စုစုပေါင်း ၁၆ ပွဲသာ ကစားထားရပါတယ်။ ၂၀၁၉ အောက်တိုဘာလမှာတော့ ဝီရှိုင်းယားဟာ နောက်ဆုံးဒဏ်ရာရရှိထားပြီး အနားယူနေရပါတယ်။ Stadium Astroနှင့် အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတော့ ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းအတွက် ပွဲပေါင်းများစွာ ကစားပေးဖို့ ဆန္ဒရှိကြောင်း ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။ “တကယ်ပြောတာပါ၊ ကျွန်တော်အသင်းပြောင်းတာက အလုပ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ရိုးရိုးသားသားဝန်ခံတာပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကစားသမားဘဝကတော့ အာဆင်နယ်အသင်းမှာ စတင်ခဲ့တာဖြစ်သလို၊ ကစားရတာပျော်ရွှင်ပါတယ်။ပြီးတော့ ဘောလုံးကစားရတာကို ချစ်မြတ်နိုးပါတယ်။ ခွင့်ပြုသလောက် ကစားခွင့်လည်းရခဲ့ပါတယ်။...
ဒဏ်ရာပြသာနာကြောင့် သူကိုယ်တိုင်တောင် စိတ်ပျက်မိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည့် ယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်လူ ပေါ့ဂ်ဘာ
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်လူ ပေါလ်ပေါ့ဂ်ဘာဟာ ဒဏ်ရာကြောင့် လက်ရှိရာသီမှာ ဒဏ်ရာပြသာနာများကြောင့် ပွဲစဉ်တော်တော်များများကို လွဲချော်ထားရပါတယ်။ ဒဏ်ရာမှ ပြန်လည်သက်သာလာဖို့အတွက် ပေါ့ဂ်ဘာဟာ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားလျက်ရှိပြီး အသင်းနှင့် အမြန်ဆုံးပြန်လည်ပူးပေါင်းနိုင်ဖို့ ဆန္ဒရှိပါတယ်။ ပေါ့ဂ်ဘာဟာ ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ကစားခဲ့တဲ့ နယူးကာဆယ်နဲ့ ပွဲပြီးကတည်းက အနားယူနေရတာပါ။ ခြေကျင်းဝတ်ဒဏ်ရာကို ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့သည့်အပြင် ဆောင်းရာသီအားလပ်ရက်အတွင်းမှာလည်း ရာသီဥတုပူနွေးစိုစွတ်သည့် ဒူဘိုင်းသို့သွားရောက်၍ ပြန်လည်ကောင်းမွန်ဖို့အတွက် အချိန်ဖြုန်းခဲ့ပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေဟာ COVID-19 ကြောင့် ရပ်နားထားရပြီဖြစ်သလို၊ ပေါ့ဂ်ဘာသည်လည်း အသင်းနှင့် မကြာခင်မှာ ပြန်လည်ပူးပေါင်းပြီး ထရိန်နင်းအပြည့်ဆင်းတော့မှာဖြစ်ကြောင်း ဆိုးလ်ရှားက ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာဖလားဆုရှင် ပြင်သစ်သား ပေါ့ဂ်ဘာက သူ့ရဲ့ ဒဏ်ရာပြသာနာများကြောင့် စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများဖြစ်ခဲ့ပုံနှင့် ဒဏ်ရာနှင့် ပတ်သတ်၍ နောက်ဆုံးအခြေအနေကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ “အခုတော့ ကျွန်တော် ထရိန်နင်းစဆင်းနေပြီဖြစ်သလို၊ ဘောလုံးနဲ့ ပြန်လည်ထိတွေ့နေပါပြီ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အချိန်အတော်ကြာ စိတ်ရှုပ်ခဲ့ရတယ်။ အခုတော့ ဒါတွေ လွတ်မြောက်သွားပါပြီ။...
မန်စီးတီးနှင့် ဒုတိယအကျော့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်ကို ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်မှ အဓိကကစားသမား ၂ ဦး လွဲချော်မည်….
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ လာမည့် မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာတော့ ချန်ပီယံလိဂ် ၁၆ သင်းအဆင့် ဒုတိယအကျော့ပွဲစဉ်ကို ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအကျော့မှာတော့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ဟာ စီးတီး၏ နောက်ကျသွင်းဂိုးများနှင့်အတူ အိမ်ကွင်းဘာနေဗျူးမှာ အရေးနိမ့်ထားခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဒုတိယအကျော့ဟာ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အတွက် နောက်တဆင့်တက်ရောက်ဖို့ အလွန်အရေးပါသည့် ပွဲတစ်ပွဲပါ။ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ရဲ့ အရေးကြီးသည့် ကစားသမား ၂ ဦးဖြစ်သည့် မာဆယ်လို နှင့် ကော်တွိုက်စ်တို့ဟာ အဆိုပါပွဲကို လွဲချော်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများနေသည်ဟု သိရပါတယ်။ အသင်းရဲ့ နံပတ်တစ်ဂိုးသမား ကော်တွိုက်စ်ဟာ နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ဘက်တစ်နဲ့ပွဲစဉ်မှာ ဘယ်ဘက်ပေါင်ခြံဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့်ဟု ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်၏ ဆေးအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာသွားခဲ့ပါတယ်။ လိုအပ်သည့် ဆေးစစ်ချက်များကို ပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်သလို၊ မကြာခင်အချိန်အတွင်း အတိအကျ အနားယူရမည့် အချိန်ကာလကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကော်တွိုက်စ်ဟာ သောကြာနေ့တွင် ကစားမည့် လာလီဂါပွဲစဉ်ဖြစ်သည့် အီဘာနှင့်ပွဲကို ရာနှုန်းပြည့်လွဲချော်မည်ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် ၄ ရက်အကြာကစားမည့်...
ခြေကျင်းဝတ်ရိုးကျိုးသွားခြင်းကြောင့် ရက်သတ္တပတ် ၈ ပတ်မှ ၁၀ ပတ်လောက်အထိ အနားယူရမည့် တော်ရိုင်းယား
အာဆင်နယ်အသင်းဆေးအဖွဲ့ဟာ လာမည့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မန်ချက်စတာစီးတီးနှင့် ပွဲစဉ်မတိုင်မှီ အသင်းမှ ဒဏ်ရာရကစားသမားများ၏ နောက်ဆုံးအခြေအနေကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာသွားခဲ့ပါတယ်။ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်အရ ပို့စ်မောက်နှင့် FA ဖလားပွဲစဉ်တွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့် ကွင်းလယ်လူ တော်ရိုင်းယားဟာ ခြေကျင်းဝတ်ရိုးကျိုးသွားခြင်းကြောင့် အနည်းဆုံး ၈ ပတ်မှ ၁၀ ပတ်လောက်အထိ အနားယူရတောမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ တော်ရိုင်းယားနှင့်အတူ အောက်ပါကစားသမားများ၏ နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုလည်း တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကယ်လန် ချိမ်ဘာစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့က ချယ်လ်ဆီးနှင့် ကစားခဲ့သော ပွဲစဉ်တွင် ဘယ်ဘက်ဒူးအရွတ်စုတ်ပြဲခဲ့သည့် နောက်ခံလူ ချိမ်ဘာစ်ဟာ အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြက်ခင်စိမ်းပေါ်မှာ ပြန်လည်ခြေချနိုင်ဖို့အတွက် အချိန်များစွာ လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ ပြန်လည်ကောင်းမွန်ရေးအဆင့်မှာတင် အနည်းဆုံး ၆ လမှ ၉ လလောက်ထိ အချိန်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုလာစီနက်စ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့ကစားခဲ့တဲ့ အဲဗာတန်နှင့် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တွင် ညာဘက်...